«SMA Breakout»: 5 Istaraatijiyad daqiiqad ah oo loogu talagalay ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
«SMA Breakout»: 5 Istaraatijiyad daqiiqad ah oo loogu talagalay ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Markaad ka fekereyso sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ganacsade waa inuusan aaminin fudeydkooda. Badhano waaweyn "CALL / PUT" ayaa sababa rabitaan deg deg ah oo la gujiyo oo si deg deg ah faa'iido looga helo. "Tilmaamayaasha laba-geesoodka ah" ee leh fallaaraha midabada leh ayaa leh ujeeddo isku mid ah iyada oo aan suurtagal ahayn in la habeeyo. Natiijadu had iyo jeer waa isku mid - luminta dhigaalka. Ha iloobin, qalabka falanqaynta farsamada ee caadiga ahi wuxuu keeni karaa faa'iido badan sida ku jirta istiraatiijiyadda "SMA Breakout".
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamood oo heer sare ah.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa (SMA) . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsi inta lagu jiro xilliyada fidsan !
Ikhtiyaar (CALL) ikhtiyaar. Qiimuhu wuxuu jabiyaa SMA hoosta ilaa kor. Astogram-ka 'Awesome Oscillator' waa mid cagaaran, kor ku xusan ama ugu dhow eber intii suurtagal ah.
Fall (PUT) doorasho. Xaaladaha soo noqnoqda: sicirka ayaa ka jabaya SMA xagga sare ilaa hoos. Astoggram cabsi leh oo Oscillator midab casaan leh, ka hooseeya ama u dhow heerarka eber.
Waxaad ku furan kartaa ikhtiyaarrada ku saabsan soo noqoshada qiimaha celceliska dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha vfxAlert . Newbie's, ganacsigan laguma talinayo, waxaa fiican inaad sugto xaqiijinta laba tilmaame!
Ganacsatada laylisku waa inay ku ganacsadaan kaliya calaamadaha binariga ah eber isgoysyada 'Oscillator Awesome'. Markaad khibrad ka kasbato, waxaad u isticmaali kartaa dib u soo celinta histogaraam-ka illaa CALL iyo hoos xulashada PUT;
Marba marka ka sii dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah uu sii socdo, waxaa sii kordheysa suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, waxaad ku furi kartaa ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee Dib-u- Celinta Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha binary ee xoogan ee ka socda vfxAlert;
Ganacsi otomaatig ah marka loo eego istiraatiijiyadda « SMA Breakout » waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta.